BrightTag: Enterprise Tag Njikwa Platform | Martech Zone
Okwu abuo nke ndi okacha amara ahia ahia n’agha na agha n’iru na intaneti bu ikike ibelata oge ibu saiti ha na ike iweputa ihe nkpado ngosiputa nke ozo na websaịtị ha. Corlọ ọrụ ụlọ ọrụ na-ahụkarị nwere ike ịnwe oge itinye aka na-ewe ọtụtụ izu ma ọ bụ ọnwa iji nweta mgbanwe na saịtị ahụ.
Otu n'ime anyị enterprise ahịa ike BrightTagNjikwa ụlọ ọrụ na njikwa aha ha na nsonaazụ dị egwu. Ebe nrụọrụ ha na-agba agba ọtụtụ nchịkọta edemede na mgbakwunye ụfọdụ ngwaọrụ ndị ọzọ. Site na itinye mkpado niile na BrightTag, oge ọrụ ha belatara nke ukwuu - na ha nwere ike ijikwa ngwaọrụ ndị ejikọtara yana otu esi sitere na BrightTag na-enweghị bugging otu weebụsaịtị ha.
Nke a bụ obere vidiyo si na 2013 CEC Merrick Momentum Awards.
BrightTag Tag Management na-eme ka ị nwere onwe gị pụọ na njedebe nke mkpado ka ị wee belata obere oge ịgbanye koodu na oge ọzọ na-agbanwe agbanwe. Otu mkpado na-eme ya niile.
Enterprise Tag Management Atụmatụ
Hazie ma melite mkpado na sekọnd. Agbaji site na usoro mmepe IT ma jikwaa mkpado na usoro iheomume gị. BrightTag si workflow na-ahapụ gị mfe jikwaa na mkpado mgbe ọ bụla na Otú ọ dị ị dị njikere. Ozugbo mepụta mkpado na ị nwere ike ihuchalu, rụọ ọrụ na deactivate, mgbe ọ bụla ị chọrọ.
Mee ọsọ ọsọ na saịtị gị na-enweghị adịkwa data bara uru. Patented Server-Direct and parallel tag loading pack a one-two punch for arụmọrụ. BrightTag's Server-Direct na-enyefe ndị mmekọ gị oge, na-ebelata ọnụ ọgụgụ nke mkpado na saịtị gị ma kwụsị ọnwụ data na egwu ya. BrightTag na-ejikwa smartly buru ibu koodu mkpado na-enweghị igbochi ọdịnaya ọdịnaya ka ndị ọrụ gị ghara ịrapara na-eche maka mkpado nwayọ.
Weghara ọ bụla ọrụ na data mmewere na saịtị gị ma kọọrọ ya ndị mmekọ gị. Nyochaa ebe a na-anakọta data na onye na-anata data na otu pịa.
Iwu azụmahịa enyere gị aka ikpebi mgbe na otú mkpado ọkụ, akara mkpọsa Attribution, tụnyere mgbere ahịa isi na isi, ezi-akụ gị ahịa mgbalị, na ndị ọzọ. Họrọ site na otu usoro iwu eji arụ ọrụ ma ọ bụ mepụta nke gị na ndị na-ewu iwu anyị.
Real-oge mkpado nlekota na akuko. Nweta ngwa ngwa na mkpado ọ bụla na ibe ọ bụla nke saịtị gị. Echiche dashboard dị mfe na-enye gị ihe nlekọta ahụ ike nke mkpado gị, ebe nyocha anyị API na-enye gị ohere izipu stats ozugbo n'ime ngwaọrụ gị.
Nzaghachi njehie ọsọ ọsọ, obere data furu efu. Chọpụta ma dozie nsogbu dị mma data na ngwa na-egosi akuko ozugbo. Nke bụ eziokwu bụ na koodu mkpado na-agba site na ihe nchọgharị ahụ bụ 10x nwere ike ibute njehie. Mkpesa njehie ozugbo na enyere gị aka ịchọpụta esemokwu, mee ihe ma gbochie ọnwụ data.
Mmekọrịta Ndị Mmekọ. Iji nhazi-and-go integrations maka otu narị narị mkpado mmekọ, ị na-agba ọsọ na nkeji. Ngwa nyocha ejiri enyere gị aka ịchọta ndị mmekọ na-erere gị aha ma ọ bụ koodu, ebe Smart Smart Tag anyị na-enye gị mgbanwe mgbe ịchọrọ ya.
Hazi iwu nzuzo nke na-enye ndị ọrụ ohere ịpụ. Site na iwu nzuzo zuru ụwa ọnụ na-agbanwe mgbe niile, ịchọrọ ngwa ọrụ na-agbanwe agbanwe nke na-achọghị ka iwepụ weebụsaịtị gị oge ọ bụla iwu gbanwere. Sọpụrụ nhọrọ ndị ahịa gị gbasara nchịkọta data ma nweta mkpado na ahịrị.
Ịmara. Mgbe mkpado na-aghọ aghụghọ, BrightTag nwere otu ndị ọkachamara na-ahụ maka mkpado ndị hụworo ya ma nye gị akụrụngwa ịchọrọ.
Tags: tinyegbamgbamisi iheGoogle Analyticskenshoom6domnitureọnụọgụgụsaịtị mmegharịịkpadotagsiche ichen'akawebụsaịtị
Ndị na-azụ ahịa ọdịnaya dị njikere maka ọgba aghara?
Na-ekwurịta okwu, na-egwu egwuregwu, na-ebu amụma ma na-ele anya ahịa